Crowdfire: Soo Saar, Curate, La wadaag, oo Daabac Mawduucaaga ku saabsan Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysashada iyo kobcinta joogitaanka warbaahinta bulshada ee shirkaddaada ayaa ah bixinta waxyaabo bixiya qiimo kuwa raacsan. Mid ka mid ah maareynta maareynta warbaahinta bulshada ee ka dhexeysa tartamayaasheeda tan ayaa ah Crowdfire.
Kaliya maahan inaad maamuli karto xisaabaadyo badan oo warbaahinta bulshada ah, kormeeri kara sumcaddaada, jadwalkaaga iyo otomatigga daabacaaddaada… Crowdfire sidoo kale waxay leedahay mashiin daaweyn ah oo aad ka ogaan karto waxyaabaha caanka ka ah baraha bulshada isla markaana ku habboon dhegeystayaashaada.
Soo-helitaanka Mawduuca Crowdfire iyo Daaweynta
Crowdfire wuxuu kuu suurta gelinayaa inaad soo ogaato maqaallada iyo sawirrada ay dhagaystayaashaadu jeclaan doonaan, sidaa darteed waad kula wadaagi kartaa dhammaan xisaabaadkaaga bulsheed si aad u ilaaliso jadwalkaaga waqtiga!
Waa kuwan muuqaalka guud ee mashiinka talo soo jeedinta maqaalkooda:
Daabacaadda Mawduuca Toosinta ee Crowdfire
Isha ku hay cusbooneysiinta boggagaaga, balooggaaga, ama dukaamada internetka, oo u abuur fariimo deg deg ah, qurux badan casriyeyn kasta si aad si fudud ugula wadaagto dhammaan boggagaaga bulshada. Crowdfire waxay u saamaxdaa daabacayaasha inay dhexgalaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin RSS-ka si ay si toos ah ugu daabacaan akoonadooda bulsheed.
Daabacaadda Mawduucyada loo qorsheeyey Crowdfire
Crowdfire wuxuu leeyahay shaqeyn aad u wanaagsan si uu u sii qorsheeyo dhammaan qoraaladaada oo aad si toos ah ugu daabacdo waqtiyada ugu fiican ama waqtiyada aad adigu dooratay, isagoo kaa badbaadinaya tan iyo waqti iyo dadaal.
Crowdfire si otomaatig ah waxay u habeysaa farriimahaaga si ay ugu fiicnaato kanaal kasta oo warbaahinta bulshada ah, iyagoo ka qaadaya madax-xanuunka farsamaynta qoraalo gaar ah mid kasta.
Ka Warbixinta Warbaahinta Bulshada ee loo yaqaan 'Crowdfire Automated Report'
Crowdfire wuxuu leeyahay warbixin dhise u suurta gelisa suuqleyda inay dhisaan, jadwal sameeyaan, oo ay la wadaagaan warbixinnada xirfadeed ee gaarka ah dhibcaha xogta aad rabto inaad muujiso.
Ku dar dhammaan shabakadaha bulshada ee aad dooratay hal warbixin
Naqshad ka-baxsan-sanduuqa dhammaan baahiyahaaga warbixineed
Xullo oo dooro qodobbada xogta ee adiga muhiimka kuu ah
Soo dejiso warbixinno diyaar u ah PPT iyo warbixinnada PDF
Jadwal u samee warbixinta toddobaadlaha / billaha ah ee tooska loogu dhoofiyo emaylkaaga
Ku soo biir 19 milyan oo isticmaale si aad u kobciso meheraddaada adoo adeegsanaya waxyaabaha ka hadlaya baraha bulshada iyo daabacaadda!
Bilaash Bilaash Crowdfire
Bixinta: Anigu waxaan ku xiran ahay Crowdfire.
Tags: maadooyinka la isku qurxiyoMuuqaal koobanbuuq badanmaaraynta sumcadrss ee warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshadadigniinta baraha bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadawaxyaabaha ku jira warbaahinta bulshadamaareynta warbaahinta bulshadabaraha bulshada ayaa sheegayakormeerka warbaahinta bulshadadaabacaadda warbaahinta bulshadatabinta warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshada